ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုကြီးတပ်ရန် စစ်ကောင်စီ ရုပ်လုံးဖော်နေ | BurmeseAsia
Home News ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုကြီးတပ်ရန် စစ်ကောင်စီ ရုပ်လုံးဖော်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုကြီးတပ်ရန် စစ်ကောင်စီ ရုပ်လုံးဖော်နေ
(FILES) In this file photo taken on March 30, 2016, Myanmar's Aung San Suu Kyi and military chief Senior General Min Aung Hlaing (R) arrive for the handover ceremony at the presidential palace in Naypyidaw. - Myanmar's military seized power inabloodless coup on February 1, 2021, detaining democratically elected leader Aung San Suu Kyi as it imposedaone-year state of emergency. (Photo by Ye Aung THU / POOL / AFP)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကတည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး ပုဒ်မလေးခုဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) ဥက္ကဋ္ဌကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေ အပါအဝင် အခြားအမှုများဖြင့်ပါ အရေးယူနိုင်ရေး ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ စွပ်စွဲချက်များဖြင့် စီကောင်စီက ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကတည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု စစ်ကောင်စီက ယမန်နေ့ (မတ် ၁၇) တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဂတိလိုက်စားသည်ဆိုသော အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ဇာတ်လမ်းကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက အစဖော်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ကျဖူးသူ စစ်အာဏာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အလွန်နီးစပ်ခဲ့သူ မောင်ဝိတ်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးကြိမ်တိုင် တွေ့ဆုံရာ၌ စက္ကူအိတ်အတွင်း ဒေါ်လာများထည့်၍ ပေးအပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သိန်းခွဲ ရှိကြောင်း စေပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် မောင်ဝိတ်၏ထွက်ဆိုချက်ကို စစ်ကောင်စီက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီလိုပေးတဲ့အချိန်တွေမှာ အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး” ဟုလည်း အဆိုပါ ရုပ်သံဖိုင်တွင် မောင်ဝိတ်က ပြောသည်။
မောင်ဝိတ်သည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် အာဏာရှိ ဗိုလ်ချုပ်အချို့နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ပတ်သက်ခဲ့သည့်အပြင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
မောင်ဝိတ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင် ၁၅ နှစ်ချခံခဲ့ရပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထောင်မှထွက်ထွက်ချင်း ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ကာ အဆက်အသွယ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မောင်ဝိတ်၏ အိမ်ထောင်ဖက်မှာ ယခင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒုသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ၏ တူမဖြစ်သူ ဖြစ်သည်။
NLD အစိုးရ၏ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်လာ ၆ သိန်းနှင့် ရွှေ ၇ ပိဿာ ပေးခဲ့သည်ဟုလည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက မတ် ၁၁ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကထွက်ဆိုသည်ဆိုသော ထိုထုတ်ပြန်ချက်တွင် မည်သည့်အတွက် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမူ မပါရှိခဲ့ပေ။
စစ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ “ဘုရား(ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ)တည်ဖို့ လှူတဲ့ကိစ္စ တွေပါ။ ဒါကို မတော်မတရား အမှုတပ်၊ အများ အမြင်လွဲအောင်လုပ်နေပေမယ့် ဘယ်သူက ဘာလဲဆိုတာ လူထုက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသားပါ။ ပြော နေစရာကို မလိုဘူး”ဟု NLD ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက Myanmar Now ကို ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ယမန်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထူထောင်ထားသည့် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် လရောင်တောစီမံကိန်းများကြောင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေအတွက် နစ်နာမှုရှိကြောင်းလည်း စွပ်စွဲထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းရုံးချုပ်အတွက် မြေအသုံးပြုရာတွင် ငှားရမ်းခများမှာ ခေတ်ကာလပေါက်ဈေးဖြင့် မလျော်ညီသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကပေါက်ဈေး၊ အခွန်စည်းကြပ်မှု နှုန်းထားများအရဆိုလျှင် ကျပ် ၁ ဘီလျံနှင့်အထက် နိုင်ငံဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု စစ်ကောင်စီက စွပ်စွဲ ထားသည်။
ထို့အတူ နေပြည်တော်ရှိ လရောင်တောစီမံကိန်းအတွက် တစ်ဧဏ ကျပ်သိန်း ၅၀ နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့မှု ကြောင့်လည်း စီမံကိန်းကုန်ကျငွေ ကျပ် ၁၈ ဘီလျံကျော် သက်သာရာရခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်နှင့် နောင်တစ်ချိန်၌ ပြတိုက်အဖြစ်သုံးရန် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်မှုမှာလည်း စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိ၍ အသေးစိတ်ဆက်လက်စစ်ဆေးဦးမည်ဟု စစ်ကောင်စီက ဆိုသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မလေးခုဖြင့် နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုတရားစွဲဆိုထားပြီးလည်းဖြစ်သည်။
ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ထိ ချမှတ်နိုင်သည့် လိုင်စင်မရှိသည့်ပစ္စည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇၊ အနီးကပ် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့မှ သုံးစွဲသည့် စကားပြောစက်များမှာ တရားမဝင် တင်သွင်းထားသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ၊ ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနှင့် မညီဘဲ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွင် ပါဝင်မှုအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ထို့အတူ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရှေ့နေဖြင့်ပင် တွေ့ခွင့်မပေးသေးပေ။
“လာမယ့်ရုံးချိန်း (မတ် ၂၄)မှာ Video Conferencing နဲ့ပဲတွေ့ရဖို့များတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖက်မှ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ခွင့်ပြုထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက Myanmar Now ကို ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုတွင် လူငယ်ရှေ့နေများဖြစ်သည့် ဦးယုယချစ် နှင့်ဒေါ်မင်းမင်းစိုးတို့ကိုသာ ရှေ့နေလိုက်တရားဝင်ရရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး ဝါရင့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်နှင့် ဦးကြည်ဝင်းတို့ အမှုလိုက်ခွင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရန် လျှောက်ထားမှုကိုမူ လျစ်လျူရှုထားဆဲဖြစ်သည်။
Previous articleဖားကန့် မအလတပ်ကို KIA သိမ်းပိုက်၍ သိမ်းဆည်းရမိတော့ လက်နက်များ
Next articleပဲခူးက ဒုရဲအုပ် ဈာပန ကူညီမည့်သူမရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့များသာ လုံခြုံရေး အပြည့်ဖြင့် အသုဘ ချ